बिपी स्मृति सहकारी अस्पतालमा पुनः डा. केसी चयन – Health Post Nepal
बिपी स्मृति सहकारी अस्पतालमा पुनः डा. केसी चयन
२०७६ मंसिर ८ गते १२:२१
बिपी स्मृति अस्पतालको कार्यसमिति एक बर्षका लागि पुन थयावत रहने भएको छ । नयाँ सहकारी ऐन अनुरुप अस्पतालमा डा केदारनरसिंह केसी अध्यक्षमा चयन भएका छन् । शनिबार सम्पन्न अस्पतालको १२औँ वार्षिक साधारणसभाले डा. केसीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो ।
यसअघि १२ औँ बार्षिक साधारण सभाले नयाँ कार्यसमिति छनौट गर्ने बताइएको थियो । तर, नयाँ कार्यसमितिका लागि गठन भएको निर्वाचन समितिले विज्ञसंगको परामर्श पछि पुरानै कार्यसमितिलाई एक बर्ष यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले अस्पतालले आगामी दिनमा न्यूरो, कार्डियो सर्जरी र क्यान्सरको उपचार थाल्ने योजना रहेको बताए ।
स्थापनाको १२ वर्षमा अस्पतालले आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्नेदेखि २५ करोड रूपैयाँ बराबरको चलअचल सम्पत्ति अस्पतालले जोडेको छ । अस्पताल नाफा कमाउने भन्दा पनि सेवा मुलक उद्धेश्यले खोलिएको भन्दै सो अनुसार न्युन आएका भएका सर्वसाधारणको पहुँचमा पर्न सफल भएको डा. केसीको भनाई थियो ।